Impendulo eKhawulezayo: Indlela yokufaka ioksijini emanzini kwiiNtlanzi ngaphandle kwePump-BikeHike
Ikhaya » Zomxube » Impendulo ekhawulezayo: Indlela yokufaka ioksijini emanzini kwiintlanzi ngaphandle kwempompo
Ndingongeza njani ioksijini kwitanki yam yeentlanzi ngaphandle kwempompo?
Ngaba iintlanzi zihlala emanzini ngaphandle kwempompo yomoya?
Uwenza njani amanzi nge-oxygen?
Ndiyifumana njani ioksijini kwitanki yam yeentlanzi?
Ingaba iintlanzi zingaphila ixesha elingakanani ngaphandle kwempompo yeoksijini?
Ngaba iitanki zeentlanzi ziyayidinga ioksijini?
Ngaba isihluzo siyayifaka ioksijini emanzini?
Uzihoya njani iintlanzi ngaphandle kweoksijini?
Ngaba iintlanzi zingaphila ngaphandle kwesihluzo?
Ngaba iitanki zeentlanzi zifuna iimpompo zomoya?
Ndazi njani ukuba iintlanzi zam zidinga ioksijini eninzi?
Ngaba iintlanzi zingaphila emanzini etephu?
Ngaba uGuppy angaphila ngaphandle kwempompo yomoya?
Loluphi uhlobo lwentlanzi olungadingi itanki yeoksijini?
Ingakanani ioksijini efunwa yintlanzi?
Ngaba ndidinga impompo ye-oxygen ukuba ndinesihluzo?
Ngaba i-goldfish idinga impompo yomoya?
Ziya kuhlala ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kwesihluzo?
Loluphi uhlobo lwentlanzi olungasifuniyo isihluzo?
Ngaba iintlanzi ziyawathanda amaqamza?
Kutheni iintlanzi zihlala phezu kwetanki?
Enye yeendlela ezilula zokuphefumla amanzi kwi-aquarium yakho ngaphandle kwempompo kukusebenzisa ibhekile okanye ikomityi. Gcwalisa nje ingqayi okanye ikomityi ngamanzi e-aquarium, yiphakamise kakuhle kwaye phezulu, kwaye uwagalele amanzi kwakhona. Amanzi aya kuchola ioksijini kwindlela ehlayo eya etankini, ngaloo ndlela ifaka ioksijini kanye emanzini.
Iindlela zokufaka ioksijini kwitanki yeentlanzi ngaphandle kwempompo Yongeza izityalo eziphila kwi-aquarium. Sebenzisa isihluzo esomeleleyo esinomlinganiselo wokuqukuqela ohlengahlengiswayo. Ukwandisa ukunyakazela kwamanzi. Ukunyusa umgangatho wamanzi. Gcina iintlanzi eziqubha kumanqanaba ahlukeneyo etanki. Ukutshintsha kwamanzi/indlela yekomityi (kwiimeko ezingxamisekileyo).
Iimpompo zomoya zinyanzela ioksijini kwitanki yakho ngokunyusa ukunyakazela komphezulu ukuze iintlanzi zakho zibene-O2 eninzi yokuphefumla. Kwiimeko ezininzi, abahlali be-aquarium yakho abayidingi ioksijini eyongezelelweyo kwaye baphila kakuhle ngaphandle kwempompo yomoya.
Ioksijini ingena emanzini ngokusasazwa ngumoya, umoya kunye nentshukumo yamaza kunye nefotosynthesis yezityalo. Amanqanaba eoksijini anyibilikileyo anyuswa ngokuncedisa umoya kunye nentshukumo yamaza, ukongeza izityalo emanzini kunye nokubeka amanzi kwioksijini esulungekileyo.
Eyona ndlela yokunyusa ioksijini kukwandisa indawo engaphezulu ye-aquarium. Yandisa ukunyakazela koMphezulu okanye intshukumo yamanzi phezu komhlaba. Oku kuvumela ioksijini engakumbi ukuba inyibilike kunye nekharbon diokside engakumbi ukuba ibaleke. Unokongeza umthombo weoksijini entsha ngokufaka impompo yomoya.
I-Goldfish kunye nezihlobo zabo ze-crucian carp zingaphila iinyanga ezintlanu ngaphandle kokuphefumla i-oksijini - kwaye ngoku siyazi ukuba njani. Intlanzi iye yavelisa isethi yee-enzymes ezithi, xa amanqanaba e-oksijini ehla, ekugqibeleni ancede ukuguqula i-carbohydrates ibe yi-alcohol enokuthi ikhutshwe ngeegill.
Ibaluleke kangakanani ioksijini kwi-aquarium? Ngokucacileyo, iintlanzi zidinga i-oksijini yokuphefumula, izityalo zidinga i-oksijini ebusuku kwaye ibhaktheriya enenzuzo idinga i-oksijini ukudiliza (i-oxygenate) inkunkuma. Ngokusisiseko yonke into efayo okanye ebolileyo kwi-aquarium ifuna kwaye ngenxa yoko ikhupha ioksijini.
Izihluzi zihamba indlela ende ekunyuseni ioksijini emanzini, njengoko zibangela ukuhamba kwamanzi kumphezulu apho kwenzeka khona utshintshiselwano lwe-oxygen. Izihluzi kufuneka zithathe amanzi ezantsi kwetanki, kwaye ziwakhulule kwakhona kwi-aquarium phezulu, ngaloo ndlela kusasaza amanzi aneoksijini kuwo wonke.
Umgangatho waManzi kunye noNyango Kuphephe ukubamba intlanzi yakho yegolide xa utshintsha amanzi okanye ucoca isitya. Dlulisa intlanzi yakho kwitanki yokubamba eyahlukileyo. Susa inkunkuma kwi-substrate ngokuhambisa kancinane iingqalutye. Nika isitya ukucoca kakuhle. Yongeza amanzi obushushu begumbi alungisiweyo (ubuncinci be-50% yotshintshiselwano).
Kuya kufuneka ucwangcise utshintsho lwamanzi oluyinxenye kanye rhoqo ngeentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 ukuze uqiniseke ukuba intlanzi yakho iphila ubomi obunempilo nobonwabileyo kwitanki yakho engacocwanga. Iintlanzi zinokuphila ngaphandle kwesihluzi, kodwa ngokuqinisekileyo azikwazi ukuphila kumanzi amdaka angenayo ioksijini.
Impompo yomoya yongeza ioksijini efunekayo kakhulu kwi-aquarium ukuze iintlanzi ziphefumle kwaye ibonelele ngeoksijini kwiibhaktiriya ezincedisa ekusetyenzweni kwe-ammonia. Ipompo yomoya yetanki yentlanzi ibalulekile kwaye inokwenza okuninzi okulungileyo kwi-aquarium yakho.
Olona phawu luxelayo lokuba intlanzi yakho idinga ioksijini engaphezulu kukuba uzibona ziphefumlela phezulu - ziya kuthambekela ukuxhoma umva ngokuphuma kwesihluzi. Le ndawo yetanki yakho idla ngokuba neyona ndawo iphezulu yeoksijini njengoko ikufutshane neyona ndawo iphazamisekileyo.
Amanzi ompompo aqhelekileyo alungile ngokuzalisa i-aquarium logama nje uyivumela ukuba ihlale iintsuku ezininzi phambi kokuba wongeze intlanzi (iklorine emanzini etephini iya kubulala intlanzi). Amathontsi amaninzi esisombululo kumanzi ompompo acocekileyo ahlala anele ukukhupha amanzi ngoko nangoko.
Ukusebenzisa i-Live Aquatic Plants ukuvelisa i-Oxygen kwi-Aquarium yakho Ukusebenzisa izityalo eziphilayo, uya kukwazi ukwenza i-ecosystem yokuzimela, engadingi ilitye lomoya okanye impompo yamanzi. IiGuppies ziya kudla ioksijini emanzini kwaye ziya kukhulula i-CO2.
Kukho iintlanzi ezininzi ezinokuphila ngaphandle kweoksijini. Ziyi-bettas, i-goldfish, i-tetras, i-guppies, i-gouramis, njalo njalo.
Iintlanzi, oononkala kunye neembatyisi ezihlala okanye ezondlayo emazantsi zifuna i-oksijini enyibilikileyo ye-3 mg / L okanye ngaphezulu. Ukuzalisa iintlanzi ezifudukayo kunye namaqanda azo kunye nemibungu ifuna ukuya kuthi ga kwi-6 mg/L ngala manqanaba obomi anobuzaza.
Impompo yomoya AYIFUNEKI le njongo, ukuba itanki yakho igcina intshukumo eyaneleyo yamanzi kunye nokushukuma komhlaba. Oku kuqhelekile ukuba izihluzi zangaphandle (umzekelo, ibhokisi okanye inkonkxa) ziyasetyenziswa. Okwesibini, iimpompo zomoya zingasetyenziselwa ukunyanzela amanzi ngesihluzo (umzekelo, isipontshi okanye isihluzo sekona).
Njengoko sele kukhankanyiwe, intlanzi yegolide ayisoloko ifuna impompo yomoya ukuze iphile. Inokwenza kakuhle kwitanki eneoksijini kakuhle ixesha elide njengoko iqhele ukwenza. Ngethuba nje kukho intshukumo eyaneleyo yomhlaba eguqulela kwi-oksijini, i-goldfish ingaphila kakuhle ngaphandle kwempompo yomoya.
Iintlanzi zisebenzisa ioksijini ekhoyo kumanqanaba asezantsi e-aquarium. Emva koko iqala ukubetha umphezulu wamanzi ukuze ifumane ioksijini engakumbi. Nangona kunjalo, iintlanzi ziphantsi koxinzelelo oluninzi kwaye zinokuphila kuphela malunga neentsuku ezimbini emva kokuphela kweoksijini.
Eyona ntlanzi ingcono kwisitya ngaphandle kwesihluzi iintlanzi zeBetta (Sebenzisa isifudumezi) iiGuppies. White Cloud Minnows. Iimfama zomqolomba iTetras. Ityuwa kunye nePepper Corydoras. Zebra Danios. Ember Tetra. Intlanzi yePea Pufferfish.
Njengam nawe, intlanzi kufuneka iphefumle. Ukwenza oku, iintlanzi zikhupha i-oksijini echithwe emanzini - ngaphandle kwayo, iintlobo ezininzi zeentlanzi ziya kuncipha. Iibhamuza zongeza ioksijini kwi-aquarium yakho. Njengoko amaqamza enyuka, ayanyakazela umphezulu, evumela isixa esikhulu seoksijini ukuba singene emanzini.
Intlanzi isenokuhlala kufuphi nomphezulu kuba izama ukuphefumla lula. Khumbula, iintlanzi ziphefumla ioksijini enyibilikileyo-hayi ioksijini esele idityanisiwe kwimolekyuli ye-H2O. Ngokwendalo, la manqanaba eoksijini anyibilikileyo athande ukuba phezulu kufutshane nomphezulu, apho ukudibana phakathi komoya namanzi kwenzeka.
Umbuzo: Ngaba iintlanzi zingaphila ngaphandle kwePump ye-Oxygen
Inokuphila ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kwempompo yamanzi
Umbuzo: Zingaphila ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kwePump yeOxygen
Zinokuhlala ixesha elingakanani iintlanzi zamanzi acocekileyo ngaphandle kweoksijini
Impendulo eKhawulezayo: Ihlala ixesha elide kangakanani iintlanzi ngaphandle kwePump
Impendulo eKhawulezayo: Zingaphila ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kwe-oxygen
Impendulo ekhawulezayo: Zihlala ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kweoksijini
Umbuzo: Zinokuphila ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kwempompo yamanzi
Inokuphila ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kwempompo
Impendulo eKhawulezayo: Zinokuphila ixesha elingakanani iintlanzi ngaphandle kwempompo yomoya
Umbuzo: Inokuphila ixesha elingakanani iintlanzi zaseTropiki ngaphandle kweoksijini
Inokuphila ixesha elingakanani iintlanzi ze-Aquarium ngaphandle kweoksijini